Ngwaahịa China ZZ Eco 6 Ench Round Sugarcane Bagasse efere, ndị a na-atụfu na Eco-Friendly, Pack nke ndị na-emepụta 1000 na ndị na-eweta ya | ZHONGSHENG
Ngwa ahia ZZ Eco 6 Ench Roc Sugarcane Bagasse efere, enwere ike iwepu ya na enyi enyi, ngwugwu 1000
Ihe adighi: YPL070
Size: 182 * 15mm
Ogo katoonu: 38 * 25 * 38cm
Mbukota: 8 * 125pcs
-H -R-:A na-eji ụdị akpa bagasse, ma ọ bụ okpete anyị eme ihe, ma a na - eme ya site na ihe eji eme ka ọ dị mma na-adigide. A na-eji ngwaahịa akpa Bagasse mee ihe sitere na okpete okpete. Mkpụrụ osisi a na-akụ n’ubi bụ mkpụrụ osisi a mịrị amị site na okpete. Iji pulp pụtara na a ga-etinye ọtụtụ ihe ọkụkụ ahụ iji mee ihe, kama ịla n'iyi.
Kpebie:Ngwa nri okpete dị nwere biodegrad, nke pụtara na enwere ike ịchụpụ ha na kọlụm / ihe mkpo nri. Na ọnọdụ kọtọtọtọ mara mma, ha nwere ike ibido kpam kpam n'ime ọnwa 3 ruo 6.
Karịa Ihe Kachasị Ese na-aga n'ihu! Ihe osise table Bagasse siri ike karịa akwụkwọ, plastik, ma ọ bụ polystyrene tableware. Ngwa ndị a enweghị ike iguzogide otu okpomoku dị ka tebụl okpete, ha adịghịkwa adịgide. Polystyrene, mpempe akwụkwọ na tebụl plastik na-ahapụ mmetụta dị njọ na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na ha abụghị ihe biodegradable na anaghị esite na ngwa ngwa ngwa ngwa mmeghari ohuru.
MARA:Ihe ndị dị na tebụl okpete nwere ike ijide nri dị ọkụ, udu mmiri, ma ọ bụ mmanu mmanu na-enweghị mmiri. Ha nwere ike iguzogide okpomoku rue ogo 212 Fahrenheit. Bagasse tableware bụ nke na-eguzogide ọgwụ ma ọ dịghị adaba na ndabaghị ngwa ngwa. Obere efere ndị a zuru oke maka nri, ihe ụtọ, ma ọ bụ obere nri. Magburu onwe ya maka buffets nwere nri oku na oriri na nnọkọ.
Zuru oke maka iji ụlọ! Epekele ndị a dị mma maka nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ma ọ bụ ihe omume ọ bụla akwadoro n'ụlọ gị! Ha bu ihe ojoo, nke putara na ewepu ha ahihia site na nri ha, ewepu oge o ga ewecha ocha! Igwe a dị na 6 ″, 7 ″, 9 ″, na 10 ″.
Eco-friendly Biodegradable & Compostable & ...
A pụrụ ịtụfu okpete akpa Bagasse Ahịhịa
ZZ Eco Ngwaahịa 6 Inch Roc Sugarcane Bagasse ...